Madaxweynaha Soomaaliya oo booqday New York oo uu ka furmayo shirka Qaramada Midoobey – Radio Daljir
Madaxweynaha Soomaaliya oo booqday New York oo uu ka furmayo shirka Qaramada Midoobey
Seteembar 24, 2013 4:49 b 0
New York, September 24, 2013 – Madaxweynaha Soomaaliya xasan sheikh Maxamuud iyo wefdi balaaran oo uu arkacayo ayaa gaaray magaalada New York ee dalka Maraykanka, halkaas oo uu ka furmayo shirka gollaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobey.
Madaxweynaha iyo wefdi ka tirsan dowladiisa oo dhowaantan booqasho ku joogay USA ayaa kulamo kala duwan la qaatay jaaliyada iyo qaar ka mid ah masuuliyiinta gobolka Ohio ee dalka Maraykanka, halkaas oo ay ku sugnaayeen maalmihii tegay.
Qoraal la dhigay war-baahinta dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Xasan sheikh uu shirka gollaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobey ka jeedin doono khudbad dheer oo uu kaga waramayo Soomaaliya iyo dadaallada ay samaysay.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale soo bandhigaya baahida ay Soomaaliya qabto wakhtigan si ay dib ugu soo noqoto mansabka dowladaha aduunka, kadib 22 sano oo ay bur bur iyo xaalado siyaasadeed oo cakiran madaxa kula jirtay.
Puntland oo qalabka xiriirka badda iyo kaarar aqoonsi siinaysa Kalluumaysatada xeebaha (Dhegeyso)
Ra?isal wasaaraha Soomaaliya oo ugu yeeray Barclays in uu ka laabto go?aankiisa xawaaladaha